Intarneet-ka La goyn Karo ee Guriga Qoysaska U Qalma
Si aad waayo-aragnimo fiican u hesho, fadlan awood sii xirmo-xogeedka xulaagaaga
Dhamaanteenna waan jecel nahay WiFi gaar ahaan markuu shaqeynaayo. Sidaas darteed waa muhiim in guriga yaalo ama loo helo siinyaale WiFi ee kan ugu xoogan. Tilmaamooyinka raac si ku xirnaanshahaaga tabo u yeesho.
WiFi 101: Gateway-gaaga Dhig Sida Xirfadle Fiidiyow
Wax ka ogow Amniga la Hormariyay ee Xfinity xFi
Cilad-bixin la sahliyay
Tiaaxaha Internet Essentials WiFi 101
Adeegsiga xFi iyo Ammaanka horumarsan
Garaafyada WiFi 101
Waa muhiim halka aad dhigto qalabka interneetka. Eeg tilmaamahan waxtarka leh ee adiga kaa caawin kara sida haboon ee loo dhigo qalabka interneetka oo aad u heli la’hayd siinyaalaha ugu xooga ee WiFi ga ee gurigaaga dhexdiisa oo dhan.
Halkaan Daawo Fiidiyowga Qari
Amniga la Hormariyay ee Xfinity xFi wuxuu kaaga digayaa wixii dhaqdhaqaaq shaki ka dhaliya shabakada WiFi ga ee gurigaaga. Amniga la Hormariyay ee ugu fiican oo dhan waa bilaas markaad hesho xFi Gateway.
Ma ogeyd seddex talaabo oo fudud oo xalin kara arimaha ugu caamka ah ee WiFi guryaha? Eeg tilmaamahan waxtarka leh ee adiga kaa caawin kara inaad ku xirnaanto oo aadna ku hesho siinyaalaha ugu xoogan ee WiFi ga ee gurigaaga dhexdiisa oo dhan.
Tibaaxaha WiFi si aad u hesho baaqa ugu xoogo badan iyo wanaajinta ugu badan ee xiriirkaaga
5 word(s) - 42 charactersXogo-garaafeedka tibaaxaha Internet Essentials WiFi 101
Qorshahaaga Internet Essentials waxaa la socda xiriir xoog badan oo ammaana ee Xfinity xFi, taas oo si fudud kuugu sahlaysa inaad maareyso xayndaabka WiFi-ga guriga gudahiisa iyo inaad abuurto guri xiriirsan oo wacan.
WiFi 101 Garaafyada waa la soo degsan karaa waxaana loo adeegsan karaa warqadaha warsidka ama dhigaallo bulsheedka.
U soo deegso WiFi 101 Garaafyada waraaqaha warsidka ama dhigaallo bulsheedka
Wax Badan oo dhanka Xarunta Waxbarashada ka soo jeeda
Bilaabitaanka naqshad garaafeedka: saldhigyo
Ka baro mabaadi'da fanka wacan si aad u naqshadeyso mareegta.
Horudhaca il abwaaneedka ugu caansan ee Intarneedka
Tillaabooyinka fudud ee hawsha warbaahinta ee caafimaadka qabta
Tusaale wanaagsan u-samaynta naftaada iyo tan qoyskaagaba.
Abuuritaanka afgaradyo badqabo oo xooggan
Hagaaga si aad u ilaaliso xog qofeed-kaaga.
Ka hel fasalada bilaash ee degaankaaga
Ka baro sida uGu wanaagsan oo loo adeegsado intarneedka fasallo qofeedka
Gali Koodhka Lambarka ZIP
Codso hadda >>